Sanad guuraddii Shanaad ee duulaankii Dalka Iraq.?
"Argagixiso la dagaalanka oo ay reer Gabeedka ka dhigtay jidkii ay u mari lahaayeen ka hortaga awooda dadka Muslinka ah".
Aroornimo maalinimo Khamiis ah, bishuna ay ku beegneed March-20-2003, dadka caalamka ku nool ayaa ku waabariistay in Magaalada Bagdad lagu weerar Madaafiicda dalka Mareekan-ka, balse dadka Islaam-ka ah waxa ay u aheed maalin maddow, sababtoo ah waxaa lagu duulay dal ka mid ah dadalka Islaamka. Dagaalkan dalka Iraq ay Mareekanka iyo xulafadiisa ay ku qaadeen waxa ay ulla baxeen magacyo fara badan. Tusaale ahaan dalka USA waxa uu ugu yeeray "Hoolgalkii xoreenta dadka Iraqiyiinta ah"—operation Iraqi freedom--halka dalka England uu ugu yeeray "Hool gal"—operation----. Iyadoo sidoo kalle loogu magac daray dagaalkii labaad ee Gacanka "Gulf war" ama dagaalkii Iraq. Marka intaas oo magac laga soo tago magaca dhabta ah waxa bixiyay Boqoralka dalka Sa'udiga Boqor Abdalle waxa uuna ku tilmaamay
Boqorl Abdallaha dalka Saudiga.
"Gumeeysiga dalka Iraq".- occupation of Iraq-.
Ujeedka ka danbeeyay in waddanka Iraq la bur-buriyo.?
Aduunka wax sabab la'aan dhaca ma jiraan, sidaa oo ay tahay duulaanka Dalka USA iyo saaxiibadiida ay gaalnimda wadaagaan waxa lagu micneeyay dhoorka arrimood ee soo socda:-
1)Sidii America ay macdanta dalka Iraq ulla bixi laheed.?
Dalka Iraq waxa uu khani ku yahay macdanta gaar ahaan shidaalke cayriinka ah, sidaa oo ay tahay waa dalka Labaad ee shidaalka ugu badan ee caalamka soo saara. Markii American-ku dalkaasi ay gudaha u galeen goobaha aysan wax dhibaato ah u geeysan waxa ka mid ah ceelasha shidaalka iyo keedka shidaalka ee dalka Iraq. Sida ciidanka dalka Ethiopia uu u daneeynayo oo kalle magaalooyinka xeebaha leh ee dalka Somalia si dalka Ethiopia uu u helo dagad uu wax kalla soo daggo.
Ciidan American ah oo waardiye ka haya dhuumaha shidaalka ee dalka Iraq.
Nin dan leh ma daalo ayay Somalidu tiraahdaa, maxay tahay danta ka danbeeysa in Bil walba ciidanka Mareekanka ay ku baxdo lacag gaareeysa $12 Million. Danbcan danta ka danbeeysa waxa ay tahay sidii Batroolka dalka Iraq uu Mareekanka ulla bixi lahaa. Arrintan ayaa keentay in dhaqaalaha America uu hoos u dhac ku yimaado sidoo kallna qiimaha doolarkana hoos ayuu u socdaa.
Dalka Iraq oo ay in mudo ah saarneed cunaqabateen ayaa sii sahlay in dalka Iraq uu si fudud ku baaba'o cunaqateentaasna waxa ay socotay 1991-2003. Markii dalka Iraq la saaray cunaqateenta caalamiga ah, dalka Iraq waxaa dadkiisa ay ku noolaayeen shidaalkooda waxana xilligaas jiray barnaamij loogu magac daray "Shidaal cunto ku badalasho"-Oil-for-food oo ay Qaramada Midoobay ay maamuleeysay Kooxaha ka dagaalamaya dalka Iraq ee la magac baxay "Muqaawamada" ama iska caabinta ayaa dhoor mar weeraro u geestay dhuumaha shidaalka, dhuumahan shidaalka goobaha ay ku yaalaan waxaa jooga ciidan adag oo American ah.
2) Alle u naxariistee Saddam oo ay American-ku Ku adeeysay in uu xiriir la lahaa Ururka Al-Qa'eda iyo in dowlada Saddam ay hubka wax bur-buriya ay sameesaneeysay.
Kaddiib markii daarihii Ganacsiga ee magaalada Newyork ee dalka USA lagu weerar diyaardo lasoo afduubtay marka ay taarikhdu aheed September,2001. madaxwayne Bush waxa uu ku dhawaaqay in uu bilowday dagaalka ladagaalanka waxa loogu yeeray Argagixisada "war on terror". Afghanistan xarunta Al-Qa'ida ayaa weerar lagu qaaday Osama iyo saaxiibadiisna waxa ay gabaad ka dhigteen buuraha Tooro Booro waloow hadda ay xoog badan ku leeyihiin dalkaasi gaar ahaan Koonfurta sida Gobalka Helmand.
Saddan Xilligii uu madaxda ahaa iyo markii la soo qabtay...
13 bishii December sanadkii 2003 ayay aheer markii Saddam Hussien ay ciiidanka America soo qabteen, maalmo badan oo uu xabsi ku jiray kaddib ayay Gaalada soo duushay iyo Gaalo raacyadaba ay ku sameeyeen "Daldalaad" maalin ciid ah dadka Muslimiinta oo dhan ay wada faraxsanyihiin Ciidana ay tahay.
Madaxwayne Bush oo hadal u jeedinaya ciidamadiisa dalka Iraq u jooga..
5 sano kaddib, Madaxwayne Saddam Hussien ay gacantooda ku dileen, dalka Iraq-na la bur-buriyay ayay leeyihiin Saddam wax xiriir ah lama laheen Ururka Al-Qa'ida. Taasi oo la macna ah in haddii aad dan leedahay ama dal aad bur-burineeysid aad isticmaashid weedha ah ladagaalanka Argagixisada. Arrinta mid la mid ah Somalia ayay ka dhacday markii Hogaamiye Kooxeedyadii ay arrinta oo kalle ay la yimaadeen wixii ka dhacayne ilaa maanta dalkii way ka socdaan, xaalada dalkana meesha ugu xumeed ayay mareeysaa.
Ciidan Ethiopian ah oo dhukeena somalia jooga
Saddam oo ay America ciil badan u qabtay waxa uu dhintay isaga oo geesi ah, carabna maalintii uu Saddam shadiiday Carabna malagood gal.!! Madaxda is dhiibtay waxaa ka mid ah Madaxwaynaha Liibiya ee sheegay in dalkiisa uu soo gabagabeeyay Bariminta Hubka wax bur-birya. Maantana waxa ay maraysaa in Kaniisado laga dhiso dalka Qadar isla markaana Sa'udiga loo sheegay in ay dhisaan Kaniisado ay dadka Christian-ka ay ku cibaadeestaan.
Warbixino ay soo saareen Amerikanka ayay ku sheegayaan in ay dowladii Saddam aysan aheen hubka war nuclear-ka aysan heeysan sidoo kallane Saddam uusan wax xiriir ah la laheen ururka Al-Qa'da.
3) Dowladii Saddam Hussien oo lagu eedeeyay in ay xuquuqda aadanaha meel ooga dhacday.
Saddam oo ahaa nin military ah, dowladiisana ay aheed dowladii Somalia ka dhisneed oo kalle, ayaa waxa lagu eedeeyaya in uu dad badan oo Iraaqiyiin ah waxyeelo u geestay sida dhacdadii magaalada Dujeel ka dhacday oo lagu laayay dad shiico ah. Arrintan oo kalle waxa ay ka dhacday Somalia, xilligii ay jirtay dowladii aysan dowlad ka danbeeynin ee kalitaliska aheed. Oo lagu eedeenayay in ay dad badna oo somali ah ay xasuuq u geeysatay.
Reer galbeedka marka ay wax damacsanyihiin ayay ka midtahay siyaasada ay adeegsadaan in dowladaha lagu eedeeyo in ay xasuuq geesteen.
Madaxwaynaha Iraq ee hadda jira waxa uu yiri "Argagixo, Faqri iyo caafimaad daro aaya nagu ah cuddur" waana ku faraxsanahay in Saddam uu meesha ka baxay. Ayuu hadalka sii raacsadsay.
Qormaddan iyo wax la mid ah duulanka Iraq loogama hadli karo, waxa kaliya ee aan ugu tala galay waxa ay tahay in dadka Somali-da ah in aan xasuusiyo in haddii dal lagu duulo aysan suura gal aheen in sida la rabay laga yeelan karo.
Dalkeena Somalia oo ay maanta caradiisa cadowgeena uu uu cagta soo dhigay ma filayo in habeena u hurdaan si wanaagsan sida Iraq ka dhacay ciidanmada America waxa laga joojiyay in ay isticmaalaan Music oo dhan si ay ula socdaan waxa ka dhacaya hareerahooda.
Dalka Iraq, Afghanistan iyo Somalia waxa ay galabsadeen ma jiraan, balse ujeedka waxa ay aheed in Iraq aysan xoog ku yeelan Bariga dhaxe sida danaha reer Galbeedka aysan ooga hor iman, Afganistana waxa loogu duulay in aysan jirin dad u Khiyaanada Gaalada hortaga, Somalia-na waxa loogu duulay sidii chiristain-ka Ethiopia aysan dhibaato ugu dhicin iyo kuwa Kenya ku noolba, Somalia waa dal la hilmaamay balse dadkiisa aysansana xoog lagu heesto madaxda ka talisa intooda badan ay yihiin daneestayaal.
Iraq, Afghanistan iyo Somalia yaa xigi doona.? Somaliana sidee xaalkooda noqon doonaa inta dunida ay ka jirto ladagaalanka Argagixisada.?
Reer Galbeedka waxa aysan wali ku guuleeysan in ay dadka Iraaqiyiinta ah isugu diraan Sunno iyo Shiico hadalka dalka Somalia dadka isugu dhow ay is dilaan taasi wax ay daliil u tahay.
somalia iyo Iraq waxa ay isaga midyihiin arrimo badan, sida dad gaara in ay Gaalada
Faafin: SomaliTalk.com | Apr 5, 2008